बजेटमा भनियो, 'सबै कारोबार बैंकबाट गरिनेछ' तर प्रचण्डकै छैन बैंक खाता ! सुरुवात आफैंबाट गर्ने कि ?
ARCHIVE, COVER STORY » बजेटमा भनियो, 'सबै कारोबार बैंकबाट गरिनेछ' तर प्रचण्डकै छैन बैंक खाता ! सुरुवात आफैंबाट गर्ने कि ?
काठमाडौँ - पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को काम चलाउ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४-७५ का लागि सोमबार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सबै कारोबार बैंकबाटै गरिने घोषणा गरेका छन् । गैर- बैंकिङ कारोबारबाट राजश्व लगायतका धेरै कुरामा घाटा भएको भन्दै सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो ।
तर दुख लाग्दो कुराचाहिं के छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै हालसम्म कुनैपनि बैंक खाता छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रममा आफ्नो बैंक खाता नभएको उल्लेख गरेका थिए ।सरकारको यो घोषणासँगै सरकारको यो घोषणा प्रचण्डबाट नै सुरुवात गर्ने कि ! भनी समाजैक संजालमा चर्चा-परिचर्चा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि समेत उनले आफ्नो तलव आफ्नो खातामा लिने गरेका छैनन् ।